Pope Francis wuxuu ugu yeeray hogaamiyaasha aduunka Fiktooriya '14' bishii May 2020 heshiis caalami ah
Filed in SIMULATION, Kacdoon ka Bixitaan, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 26 September 2019	• 10 Comments
Pope Francis, Jesuit Saint Nicholas oo aan gadh-ku-dhejin, oo ah ku-xigeenka Ciise Masiix ee dhulka, wuxuu ugu yeedhay 2 dhammaan hoggaamiyeyaasha adduunka toddobaadyo ka hor inay u yimaaddaan Vatican-ka 14 bishii May 2020 ee loo yaqaan 'Global Pact' (heshiis caalami ah). Waxaa jira labo shay oo muhiim ah ajendaha kulanka oo qof walba ay tahay inuu yimaado. Midda koowaad waa […]
DAQIIQADII: Kiniiniga dib-u-cusboonaysiinta ayaa run ah! Ninka da'da ah ee 80 ayaa liqay markii ugu horeysay ka dib markii la baadho xoolaha
Filed in SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 29 August 2019	• 1 Comment
David Sinclair waa borofisar ku takhasusay cilmiga hiddo-wadaha, Machadka Blavatnik iyo xiriiriyaha xarunta Paul F. Glenn Center ee cilmiga farsamada noolaha ee Dugsiga Caafimaadka Harvard. Soojeedinta hoose, wuxuu sharraxayaa sida habka gabowga jirka bini-aadamka inta badan ula xiriirto luminta macluumaadka; la mid ah […]
Waa maxay sababta aadanaha loogu jirrabo inuu ku dhinto geeri la'aan iyo cilaaqaadka AI
Filed in SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 30 July 2019	• 14 Comments
Haddii aan akhrino dhammaan calaamadaha ay yihiin waxa ay yihiin, markaa waxaan aragnaa in dunidu ay si dhakhso ah isu beddeleyso iyo in 2.0 aadanaha uu yahay xaqiiqo hadda iyo sannadihii 10. Waxaan la kulmi doonnaa dhulka iyo adduunka guud ahaan "2.0" (iyo noocyo kale oo badan) oo ku xeeran 2045. Sidaa daraadeed qaansoroobaadka qaansoroobaad meelkasta oo aad joogtid waa [...]
Laga soo bilaabo Rutger Hauer ee Fruit Fruit to Gay Pride iyo Bandhiga Milkshake
Filed in SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 29 July 2019	• 5 Comments
Waxaa la i weydiiyay shalay hadii aan arkay filimada Rutger Haerer. Sida laga soo xigtay qoraaga, kuwaasi waxay ahaayeen aflagaado dhulka hoostiisa mara. Miraha Turkiga maxaa yeelay waxay jabisay tabta kacsiga ah filinka kalena filimku wuu fiicnaa. Waligeey ma arkin labadan filim, maxaa yeelay waxaan leeyahay nooc ka mid ah diidmada dabiiciga ah ee hypes, laakiin dabcan waan ogahay […]
Macluumaadka muhiimka ah ee noloshaada hadda
Filed in SIMULATION	by Martin Vrijland	on 22 July 2019	• 19 Comments
Waa wakhti aad uga baxdo dunida riyadii oo aad bilowdo in aad eegto aduunka adigoon kugu haboonayn wixii qiimo leh. Taasi waxay keeni doontaa isbeddel aasaasi ah noloshaada. Sidaa daraadeed waxaan jeclaan lahaa in aan tilmaamo soo bandhigista Richard Thieme (oo hoosta hoose ee maqaalkani), wadaad hore oo isbedelay [...]
"Nooca la simay," "dib u dhiska miyir-beelka," miyuu jiraa?
Filed in SIMULATION, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 20 July 2019	• 12 Comments
Toddobaadkan wadahadal yar ayaa ka dhacay goobta bogga ku saabsan reincarnation iyo su'aasha ah in uu jiro. Sida laga soo xigtay wadahadalka, waxaa jiri lahaa hadalo markhaati oo ku filan oo caddaynaya in reincarnation uu jiro. Fikradahaygu waa in dooddu ay noqoto mid aad u adag marka aad gasho dhab ahaanta dhabta ah [...]
Sidee ayaan u sameyneynaa isbeddel weyn haddii 99% ay tahay mid aan nooleyn?
Filed in SIMULATION	by Martin Vrijland	on 15 July 2019	• 32 Comments
Hadda waxaan ku soo gabagabeynay in dad badan oo nagu wareegsan ay yihiin kuwo aan rumaysan nahay (eeg maqaalkan), waxaan kaa codsanayaa inaad mar kale ka fekerto arrintan. Uma jeedo 'hab lagu hadlo' ama 'tusaalooyin', maya micnaheedu ma aha mid aan sax ahayn. "Tag oo ku dhufo" waa hadal cad oo la yaqaan [...]
'Ego' waa barnaamijka AI ee dhamaystiraya autopilot ee bio-robot-bini-aadanka
Filed in SIMULATION	by Martin Vrijland	on 11 July 2019	• 13 Comments
Kuwa akhriyay maqaalka ku saabsan dadka aan waxba galabsan (NPCs) waxay hadda fahmi karaan in ereyga "miyirka" ama "nafta" loo barbardhigi karo xiriirka khadka ah ee u dhexeeya maskaxda maskaxda oo leh muuqaal sawir ah. Avatar ee jilitaanku waa, sida ay ahaayeen, si gooni u kontaroolo oo sidaas loo waxyooday. Maqaalkani [...]
Ma jiraan dad badan oo hareerahaaga ah oo aan haysan jir ahaan (miyuus la'aan)?
Filed in SIMULATION	by Martin Vrijland	on 8 July 2019	• 17 Comments
Waxay ku dhowdahay in la qiyaasi karo, laakiin miyaad weligiin la yaaban tahay in dadka qaarkood oo hareerahaaga ahi ay yihiin 'naf'? Waxa kaliya oo aad u baahan tahay in aad eegto agagaaraha nolosha maalinlaha ahna mararka qaarkood waxaad heleysaa dadka awood u leh inay u dhaqmaan, laakiin dhab ahaantii gebi ahaanba [...]
Kama xalin karno dhibaatooyinka aduunka adoo ka fikiraya ama hadlaya, laakiin sidan:
Filed in SIMULATION	by Martin Vrijland	on 21 June 2019	• 3 Comments
Horaanba waxaan ugu yeeray fiidiyo ka timid Roald Boom, oo aan shakhsi ahaan u garanayn, laakiin aan ka daawaday cajaladda YouTube ka hor 1x. Hadalka hadalka hoose (kaas oo aan helay), Roald wuxuu ku dhow yahay nuxurka ujeedadeyda. Waxa uu sheegay in Einstein uu soo jeediyay 'Waxaan xallin karno dhibaatada isla heerka fikirka' [...]
Guud ahaan Wadarta: 13.750.624
Martin Vrijland op Marqaatiga taajirka ah iyo ciyaarta udhaxeysa gobolka iyo dambiyada wakiilada (qareenka Meijering iyo Plasman)
Sunshine op Marqaatiga taajirka ah iyo ciyaarta udhaxeysa gobolka iyo dambiyada wakiilada (qareenka Meijering iyo Plasman)
Wilfred Bakker op Tallaabada koowaad waa calaamadaynta, tallaabada labaad waa ka saaritaan: badhanka tallaalka
Ku biir 1.681 macaamiisha kale